ဆရာမ မိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့ဝတ္ထုထဲက ငြိမ်းအဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု - Cele GabarCele Gabar
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမရဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို ရူးသွပ်စွာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ တကယ့် အနုပညာရှင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ စိုင်းစိုင်းကိုချစ်တယ် ၊ ပဟေဠိနတ်သမီး စတဲ့ ကား တွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်ရှိလာခဲ့သလို အခုနောက်ပိုင်းမှာ “ မီ “ ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ သူမရဲ့ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မှုတွေကို ပရိသတ်ရှေ့ချပြနိုင်ခဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေအများကြီးက ပိုပြီးအားပေးလာကြ တာ တွေ့ရပါတယ် ။ လတ်တလောမှာလည်း ဇဏ်ခီနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ကားကြီး တကားကို ရိုက်ကူးနေပြီး ဘယ်လို အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဖမ်းစားဦးမလဲ ဆိုတာကတော့ ရင်ခုန်စရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
လက်ရှိ သတင်းတွေအရတော့ ပိုင်ဖြိုးသုကို နောက်ထပ် ရင်ခုန်ရ မယ့် ဇာတ်ကောင် အနေနဲ့ ဆရာမ မိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့” ငြိမ်း ကို ရှက်ပါ ” မှာ မြင်တွေ့ရမယ်လို့ သတင်းထွက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ် ။ မိဘတွေရဲ့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုများကို သိနေရပြီး ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တဲ့ မသန်စွမ်းလေး ငြိမ်း ၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက ချစ်ခဲ့ရပြီး ဆန္ဒပေါင်းမြောက်များနဲ့ စောင့်စားခဲ့သော်လည်း မျှော်လင့်ချက်များ ပျက်သုန်းခဲရတဲ့အခါ မောင်နှမများနဲ့ မိဘများကို စိတ်ချမ်းသာစေလိုတဲ့ ငြိမ်း ၊ သက်တမ်းရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်ကို ဝှီးချဲပေါ်မှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရသော်လည်း စိတ်ဓာတ်ခွန်အားသန်စွမ်းတဲ့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းခဲ့သူလေး ငြိမ်း ၊ သေဆုံးသွားချိန်အထိ စိတ်ဒဏ်ရာများကို တစ်ကိုယ်တည်း ခံစားသိမ်းဆည်းရင်း မိသားစုကို ပေါင်းစည်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်း ၊ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ်လို့သတင်း တွေထွက်ပေါ်နေ တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ငြိမ်း ကို ပုံဖော်မယ့် ပဲ့ကိုင်ရှင် ကရော ဘယ်သူများ ဖြစ်မလဲ? အများယူဆ နေကြသလို ကိုဏကြီး ဘဲ ဖြစ်နေမလား ဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ.။ လက်ရှိသတင်းသာ မှန်ခဲ့ရင် … ပရိတ်သတ်အကြိုက် အနုပညာပြောင်မြောက်မယ့် နောက်ထပ် ရုပ်ရှင်တစ်ကား ထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်လို့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြိုပြီးရင်ခုန်နေကြပြီထင်ပါတယ်နော် ။
ဆရာမ မိုးမိုး(အငျးလြား) ရဲ့ဝတ်ထုထဲက ငွိမျးအဖွဈ မွငျတှရေ့မယျလို့ သတငျးထှကျနတေဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမရဲ့ ဆရာဝနျဘဝကို စှနျ့လှတျပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို ရူးသှပျစှာလုပျကိုငျနတေဲ့ တကယျ့ အနုပညာရှငျကောငျးတဈယောကျဖွဈပါတယျ ။ စိုငျးစိုငျးကိုခဈြတယျ ၊ ပဟဠေိနတျသမီး စတဲ့ ကား တှနေဲ့ ပရိသတျရငျထဲရောကျရှိလာခဲ့သလို အခုနောကျပိုငျးမှာ “ မီ “ ရုပျရှငျကားကွီးနဲ့ သူမရဲ့ပီပွငျတဲ့ သရုပျဆောငျ မှုတှကေို ပရိသတျရှခေ့ပြွနိုငျခဲ့အတှကျ ပရိသတျတှအေမြားကွီးက ပိုပွီးအားပေးလာကွ တာ တှရေ့ပါတယျ ။ လတျတလောမှာလညျး ဇဏျခီနဲ့အတူ ရုပျရှငျကားကွီး တကားကို ရိုကျကူးနပွေီး ဘယျလို အမိုကျစားသရုပျဆောငျမှုတှနေဲ့ဖမျးစားဦးမလဲ ဆိုတာကတော့ ရငျခုနျစရာပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ ..။
လကျရှိ သတငျးတှအေရတော့ ပိုငျဖွိုးသုကို နောကျထပျ ရငျခုနျရ မယျ့ ဇာတျကောငျ အနနေဲ့ ဆရာမ မိုးမိုး(အငျးလြား) ရဲ့” ငွိမျး ကို ရှကျပါ ” မှာ မွငျတှရေ့မယျလို့ သတငျးထှကျတှထှေကျပျေါနပေါတယျ ။ မိဘတှရေဲ့ လူမှုရေးဖောကျပွနျမှုမြားကို သိနရေပွီး ဘယျလိုမှ မတတျနိုငျတဲ့ မသနျစှမျးလေး ငွိမျး ၊ ငယျစဉျကတညျးက ခဈြခဲ့ရပွီး ဆန်ဒပေါငျးမွောကျမြားနဲ့ စောငျ့စားခဲ့သျောလညျး မြှျောလငျ့ခကျြမြား ပကျြသုနျးခဲရတဲ့အခါ မောငျနှမမြားနဲ့ မိဘမြားကို စိတျခမျြးသာစလေိုတဲ့ ငွိမျး ၊ သကျတမျးရဲ့ သုံးပုံနှဈပုံကြျောကို ဝှီးခြဲပျေါမှာ ကုနျဆုံးခဲ့ရသျောလညျး စိတျဓာတျခှနျအားသနျစှမျးတဲ့ ဖွူစငျသနျ့ရှငျးခဲ့သူလေး ငွိမျး ၊ သဆေုံးသှားခြိနျအထိ စိတျဒဏျရာမြားကို တဈကိုယျတညျး ခံစားသိမျးဆညျးရငျး မိသားစုကို ပေါငျးစညျးစရေနျ ဆောငျရှကျခဲ့တဲ့ ငွိမျး ၊ အဖွဈ သရုပျဆောငျမယျလို့သတငျး တှထှေကျပျေါနေ တာပဲဖွဈပါတယျ ။ ငွိမျး ကို ပုံဖျောမယျ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ ကရော ဘယျသူမြား ဖွဈမလဲ? အမြားယူဆ နကွေသလို ကိုဏကွီး ဘဲ ဖွဈနမေလား ဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ.။ လကျရှိသတငျးသာ မှနျခဲ့ရငျ … ပရိတျသတျအကွိုကျ အနုပညာပွောငျမွောကျမယျ့ နောကျထပျ ရုပျရှငျတဈကား ထှကျပျေါလာမှာ ဖွဈလို့ ပရိသတျကွီးလညျး ကွိုပွီးရငျခုနျနကွေပွီထငျပါတယျနျော ။
Previous Previous post: သူထူးစံ ရဲ့ အင်တာဗျူးတွေကြောင့် ငိုနေရတယ် ဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ
Next Next post: တိုင်းပြည်အတွက်ဘာစကားကြီး စကားကျယ်မှ မပြောကြဘဲ သူတို့တွေ အမှိုက်ကောက်နေကြတယ်
အမာခံ ပရိသတ်တွေရဲ့ အကူအညီတွေ ထောက်ပံ့မှုတွေ ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးဧရာ
Published: February 7, 20196:34 pm
ဒီနှစ်မှာလည်း နေတိုးတစ်ယောက် အကယ်ဒမီ ထပ်ရနိုင်ချေရှိကြောင်း နမိတ်ဖတ်ချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ဆုပန်ထွာ
Published: March 11, 20197:15 pm
ကျန်းမာရေးပါထိခိုက်သွားလို့ အနားယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ ဆရာမကြီးဒေါ်သန်းမြင့်အောင်
Published: February 20, 20195:49 pm
ထောင်မကျ ရင် အိမ်ထောင်ကျမယ် လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ ဝေဠုကျော်
Published: December 9, 20184:01 pm